Ala a abụghị ire ere - Geofumadas
Disemba, 2017 cadastre
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị site na Frank Pichel, nke ọ na-enyocha uru agbakwunyere nke nchekwa iwu metụtara ụlọ. The mbụ ajụjụ bụ na-akpali ma nnọọ eziokwu; Ọ na-echetara m nleta m gara aga na nso nso nke Granada na Nicaragua, ebe ụlọ mara mma nke colonial nwere n'ụzọ nkịtị ihe onwunwe "esemokwu, atụla ịzụta nsogbu", na n'akụkụ ya ụlọ na-esote ya na akụ na-ezo aka n'ụlọ ọzọ na-ekwu "ndị ohi , ha zuru ulo m ohi ».
Ihe edere na njedebe na-ezo aka na nnyocha ntụgharị uche nke nwere ike ịtụle nchebe nke ihe onwunwe anyị.
Ịchọrọ ire ihe onwunwe gị n'ime akụ na ụba mepere emepe?
Tinye akara ahịa.
Ịchọrọ idebe ihe onwunwe gị n'ime akụ na ụba na-abata?
Debe ihe ịrịba ama ire ere.
Ihe ịrịba ama ndị na-egosi na ndị na-ereghị ala na-amụbawanye na mbara ala si Nigeria ruo Tanzania.
Ọ na-eme ka ịrị elu na-arịwanye elu nke ala nile n'Africa na-arịwanye elu nakwa usoro ndị ọchịchị na-adịghị mma ma ọ bụ ndị na-adịghị mma nke na-anọgide na-emebi nchebe na akụ na ụba.
Ala ka bụ ihe kasị baa uru na nke kachasị dị ala na ọtụtụ ndị Africa. Ụlọ akụ Ụwa kwuru na pasent 90 nke ala dị n'Africa abụghị ihe arụkọtara. Ọtụtụ ndị inyom na ndị inyom n'Africa na-adabere na ala a, bụ nke ha na-enweghị ezigbo nchekwa, maka ụlọ ha na ụzọ ha si ebi ndụ.
Enweghị akwụkwọ nke ala ikike - nakwa dị ka wayo akwụkwọ na-esokwa ala dysfunctional systems - pụtara na ndị mmadụ mgbe ụfọdụ ịzụta ala onye na-abụghị ya ezi nwe. Ọtụtụ mgbe, e nweghị emelitere ma ọ bụ ọha na eze na ala nye site na otu ukara gọọmenti registration, nke doo ọ bụla nwere mmasị asịwo enweghị n'ụzọ ọ bụla iji nyochaa na ha na-negotiating zuo nke a onwunwe na ndị na n'ezie nwere. Ya mere, ndị mmadụ ndị nwere ala, mgbe ụfọdụ, na-eche ihu investors ndị na-akwụ ụgwọ a otutu ego ịzụta ala-ha onye na-enweghị ikike. Nke a bụ nsogbu kachasị mma maka ndị dị iche iche mebiri emebi, karịsịa ndị inyom, bụ ndị na-enwekarị akwụkwọ iwu banyere ikike ala ha, na, ebe ha bụ ndị di ha nwụrụ, na-ahụkarị ndị ọzọ na-ekwu na ha nwere ikike nke ala ha bi ma ọ bụ ha gbawara
The eto eto ude nke foundational ọrụ nke ala ikike na adigide mmepe na-eme ka ọchịchị na-eche ihu nsogbu a na Liberia, Ghana na Uganda, niile arụ ọrụ na-emepe emepe a usoro nke ala ikike.
Nanị izu gara aga, onyeisi oche Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, gwara nzukọ nke Green Green African na ụwa ga-anọgide na-ata ụnwụ nri na ụnwụ ruo mgbe mba nyere obere ndị ọrụ ugbo nche na ohere ha chọrọ itinye ego na ala ha ma meziwanye ihe ubi ha site na iwusi ikike ha na ala ha.
Ugbu a, a ọhụrụ mmekọrịta nnyocha e mere na-enyere ka a mata nsogbu a na mmetụta nke ala ikike na-enweghị nche na nchekwa umu, nche, ịda ogbenye mbelata na ụba na ikike nke ndị inyom na Africa na karịrị.
Lee nnyocha ahụ
Previous Post«Previous TopView - Ngwa maka nyocha na oke ala
Next Post Usoro QGIS kasị mma na SpanishNext »